Burush qiiq ah qaraarada cirka isku shareeraya | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan ku sii wadaynaa burushyo badan, haddii qof uu doonayo kafee, halkan waxaad ku haysataa laba koob. Maanta waxaa si aad ah diirada loogu saaray qaraar sare, taasina waa in buraashka aan maanta kuu keenay ay yihiin kuwo tayo fiican leh, oo ugu fiican marka ay tahay qiiqa (qofna xumaan uma fikiro).
Ku dhowaad dhammaan burushka waxay ku jiraan xallinta ugu badan ee ka badan 2000 pixels, sidaa darteed waxay ku habboon yihiin ficil ahaan nooc kasta oo shaqo ah oo aad ku lug leedahay ama aad ka fikirto, mar kasta oo aad rabto inaad isticmaasho burushyo leh qiiq saameyn leh.
Degso | Burush HD
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Burush qiiqa qaraarada cirka sare
FANTASTIC. WAAD MAHADSAN TAHAY
Ku jawaab Miguelon
Waxay ku samaysan yihiin sawirro sidaa darteed ... Waxay ku argagaxsan yihiin sanduuq aan hadda ku arko shaybaarrada ay ka tagayaan, oo iska jir inaanan qorin aasaas la'aan (waan soo dejiyey), waan tijaabiyey wayna eegaan laga cabsado. Ma aha burush laftiisa, laakiin waa sawirro la waafajiyay. Ka sokow in ku dhowaad 120 MB aan la furin. Muxuu xalku muhiim ku yahay kiiskan? Haddii aan la shaqeyno sawirro yar yar waxaan waqti ku lumineynaa tirtirida geesaha karaahiyada leh ee «burushka» ka baxo.
Ku jawaab Blackstar
janalexis 36 dijo
Waqti badan lumay parce, waa inaad haysataa dhowr lammaane oo ah burushka 10-20, ma haysto waqti badan oo aan ku soo dejiyo.
Ku jawaab juanalexis 36
Mahadsanid, burush wanaagsan oo aad u faa'iido badan, raaxo